Ọpụpụ 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Iwu e nyere ndị Izrel (1-36)
Gbasara ndị Hibru bụ́ ndị ohu (2-11)
Gbasara iti mmadụ ihe ma ọ bụ ịkụgbu mmadụ (12-27)
Gbasara anụmanụ (28-36)
21 “Ihe ndị a bụ ihe ndị m kpebiri ị ga-agwa ha:+ 2 “Ọ bụrụ na ị zụta onye Hibru ka ọ bụrụ ohu gị,+ ọ ga-abụ ohu ruo afọ isii. Ma n’afọ nke asaa, ọ ga-enwere onwe ya n’akwụghị gị ụgwọ ọ bụla.+ 3 Ọ bụrụ na ọ bịara naanị ya, ọ bụ naanị ya ga-ala. Ọ bụrụ na ọ kpọ nwaanyị bịa, ya na nwunye ya ga-eso laa. 4 Ọ bụrụ na nna ya ukwu lụnyere ya nwaanyị, ya amụọrọ ya ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwaanyị, nwunye ya na ụmụ ya ga-abụ nke nna ya ukwu, naanị ya ga-ala.+ 5 Ma ọ bụrụ na ohu ahụ ekweghị ala, wee sị, ‘Ahụrụ m nna m ukwu na nwunye m na ụmụ m n’anya. Achọghị m inwere onwe m,’+ 6 nna ya ukwu ga-akpọta ya n’ihu ezi Chineke. Ọ ga-akpọrọ ya gaa n’ọnụ ụzọ ma ọ bụ n’awara ụzọ ma jiri ihe e ji akpọpu ntị kpọpuo ya ntị. Ọ ga-abụzi ohu ya ná ndụ ya niile. 7 “Ọ bụrụ na nwoke eree nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ ohu, ọ bụghị otú nwoke bụ́ ohu si ala ka ọ ga-esi ala ma o nwere onwe ya. 8 Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ adịghị nna ya ukwu mma, nna ya ukwu ejighịkwa ya mere iko nwaanyị, kama ya ekpebie iresị ya onye ọzọ,* ọ gaghị eresị ya ndị mba ọzọ n’ihi na ọ ghọrọ nwaanyị ahụ aghụghọ. 9 Ọ bụrụ na ọ kpọnye ya nwa ya nwoke, ọ ga-emere ya ihe mmadụ na-emere nwa ya nwaanyị. 10 Ọ bụrụ na ọ lụọ nwaanyị ọzọ, ọ ga na-enye nwunye mbụ ya ihe oriri, ákwà, na ihe ruuru ya*+ otú o kwesịrị. 11 Ọ bụrụ na ọ gaghị emere nwaanyị ahụ ihe atọ a, nwaanyị ahụ ga-ala n’akwụghị ya ego ọ bụla. 12 “A ga-egbu onye ọ bụla kụgburu mmadụ.+ 13 Ma ọ bụrụ na ọ maghị ụma gbuo onye ahụ, ezi Chineke ekwe ka ihe a mee, m ga-ahọpụtara unu ebe o nwere ike ịgbaga.+ 14 Ọ bụrụ na mmadụ ewesa mmadụ ibe ya oké iwe ma mara ụma gbuo ya,+ a ga-egbu ya. Ọ bụrụgodị na ọ gbagara n’ebe ịchụàjà m, unu ga-akpọpụta ya ma gbuo ya.+ 15 A ga-egbu onye tiri nne ya ma ọ bụ nna ya ihe.+ 16 “Ọ bụrụ na mmadụ atọrọ mmadụ+ ree ma ọ bụ a chọta onye ahụ n’aka ya,+ a ga-egbu ya.+ 17 “Onye ọ bụla kpọrọ nne ya ma ọ bụ nna ya iyi,* a ga-egbu ya.+ 18 “Ihe a bụ ihe unu ga-eme ma ọ bụrụ na ụmụ nwoke na-ese okwu, otu atụọ ibe ya nkume ma ọ bụ kụọ ya ọkpọ* wee merụọ ya ahụ́, ma ọ nwụghị, kama ọ naghị ebiliteli n’àkwà* ya: 19 Ọ bụrụ na o bilie jiri mkpara gagharịwa n’èzí, a gaghị ata onye ahụ tụrụ ya nkume ma ọ bụ kụọ ya ọkpọ ahụhụ. Naanị na ọ ga-akwụ onye ahụ o merụrụ ahụ́ ụgwọ maka oge niile ọ na-arụghị ọrụ ruo mgbe ọ gbakechara. 20 “Ọ bụrụ na mmadụ akụọ ohu ya nwoke ma ọ bụ ohu ya nwaanyị osisi, kụgbuo ya, a ga-ata ya ahụhụ.+ 21 Ma ọ bụrụ na ohu ahụ anwụghị ruo otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ, a gaghị ata onye nwe ya ahụhụ n’ihi na ọ bụ ego ya ka o ji zụọ ya. 22 “Ọ bụrụ na mmadụ abụọ na-alụ ọgụ, ha emerụọ nwaanyị dị ime ahụ́, ya amụọ nwa mgbe oge ya na-erubeghị,*+ ma e nweghị onye nwụrụ,* onye ahụ merụrụ nwaanyị ahụ ahụ́ ga-akwụ ihe ọ bụla di ya gwara ya kwụọ. Ọ ga-abụkwa ihe ndị ikpe kpebiri.+ 23 Ma ọ bụrụ na e nwee onye nwụrụ,* a ga-egbu onye ahụ gburu mmadụ.*+ 24 Onye kụkpọrọ mmadụ anya, a ga-akụkpọ ya anya. Onye kụpụrụ mmadụ ezé, a ga-akụpụ ya ezé. Onye gbajiri mmadụ aka, a ga-agbaji ya aka. Onye gbajiri mmadụ ụkwụ, a ga-agbaji ya ụkwụ.+ 25 Onye dara mmadụ ọkụ, a ga-ada ya ọkụ. Onye merụrụ mmadụ ahụ́, a ga-emerụ ya ahụ́. Onye kụrụ mmadụ ọkpọ, a ga-akụ ya ọkpọ. 26 “Ọ bụrụ na mmadụ akụọ ohu ya nwoke ma ọ bụ ohu ya nwaanyị ihe n’anya, kụkpọọ ya anya, ọ ga-ahapụ ohu ya ahụ ka ọ lawa iji kwụọ ya ụgwọ maka anya ya.+ 27 Ọ bụrụ na ọ kụpụrụ ohu ya nwoke ma ọ bụ ohu ya nwaanyị ezé, ọ ga-ahapụ ohu ya ahụ ka ọ lawa iji kwụọ ya ụgwọ maka ezé ya. 28 “Ọ bụrụ na ehi asọọ nwoke ma ọ bụ nwaanyị mpi, onye ahụ anwụọ, a ga-eji nkume tụgbuo ehi ahụ,+ a gaghịkwa eri anụ ya eri. Ma a gaghị ata onye nwe ehi ahụ ahụhụ. 29 Ma ọ bụrụ na ehi ahụ na-asọbu ndị mmadụ mpi, ya abụrụkwa na a dọọla onye nwe ya aka ná ntị, ma o jideghị ehi ahụ, ehi ahụ egbuo nwoke ma ọ bụ nwaanyị, a ga-eji nkume tụgbuo ehi ahụ, gbuokwa onye nwe ya. 30 Ọ bụrụ na a gwa ya ihe ọ ga-akwụ ka ọ gbara isi ya, ọ ga-akwụ ihe niile a gwara ya kwụọ ka ọ bụrụ ihe o ji gbapụta ndụ* ya. 31 Ma ọ̀ bụ nwa nwoke ma ọ̀ bụ nwa nwaanyị ka ehi ahụ sọrọ mpi, a ga-eme onye nwe ya ihe a m kpebiri. 32 Ọ bụrụ ohu nwoke ma ọ bụ ohu nwaanyị ka ehi ahụ sọrọ mpi, onye nwe ehi ahụ ga-akwụ nna ukwu ohu ahụ shekel* iri atọ. A ga-ejizi nkume tụgbuo ehi ahụ. 33 “Ọ bụrụ na mmadụ emeghee olulu ma ọ bụ gwuo olulu, ma o kpuchighị ya ihe, ehi ma ọ bụ jakị adaba n’ime ya, 34 onye nwe olulu ahụ ga-akwụ ụgwọ ya.+ Ọ ga-akwụ onye nwe anụ ahụ ego ole anụ ahụ ruru. Anụ ahụ nwụrụ anwụ ga-abụzi nke ya. 35 Ọ bụrụ na ehi mmadụ emerụọ ehi onye ọzọ ahụ́, ehi ahụ anwụọ, ha ga-ere ehi ahụ dị ndụ, kee ego e retere ya. Ha ga-ekekwa anụ ahụ nwụrụ anwụ. 36 Ma ọ bụ, ọ bụrụ na e nwere ehi a ma na ọ na-asọ anụmanụ ndị ọzọ mpi, ma onye nwe ya ejideghị ya, onye nwe ya ga-akwụ ụgwọ anụmanụ ọ sọgburu. Ọ ga-eji ehi kwụọ ụgwọ ehi. Nke ahụ nwụrụ anwụ ga-abụzi nke ya.
^ Na Hibru, “ka a gbara ya.”
^ Ya bụ, mmekọahụ.
^ Ma ọ bụ “bụrụ nne ya ma ọ bụ nna ya ọnụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “kụọ ya ihe e ji arụ ọrụ.”
^ Ma ọ bụ “n’ihe ndina.”
^ Na Hibru, “ụmụ ya apụta.”
^ Ma ọ bụ “merụrụ nnukwu ahụ́.”
^ Ya bụ, nwaanyị ahụ ma ọ bụ nwa ya.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ga-alara mkpụrụ obi.”
^ Otu shekel bụ gram 11.4. Gụọ B14.